အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းသည်နည်းပညာပေးသူများအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအားစားသုံးသူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပြောင်းလဲရန်လမ်းပြမြေပုံများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ရန်နှင့်တိုးတက်အောင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ငါတို့မူကားဤအချက်အထိအချို့သောယူဆချက်ကိုလုပ်ပြီးပြီ။ လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ရောင်းအား၏အထွေထွေဆောင်ပုဒ်မှာကျွန်ုပ်တို့ထင်ထားသည့်အတိုင်းအပြောင်းအလဲမြန်ပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်သည်။
Cisco မှဝယ်ယူထားသောပျမ်းမျှထုတ်ကုန်သည်ကွဲပြားခြားနားသောဖောက်သည်ခရီး ၈၀၀ ကျော်ရှိသည်ဟုသုတေသနပြုခဲ့သည်။ သင်၏ဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်သင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်လမ်းပေါ်တွင်ဆက်လက်ရှာဖွေနေသည်နှင့်အမျှသုတေသန၊ အွန်လိုင်း၊ စတိုးဆိုင်၊ အီးမေးလ်၊ ရှာဖွေမှုနှင့်အခြားနည်းဗျူဟာများအကြားမည်သို့ခုန်ပျံမည်ကိုစဉ်းစားပါ။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပညာရှင်များသည်အရည်အချင်းပြည့်ဝမှုနှင့်ရုန်းကန်နေရသည် အလွန်။ ဒါဟာနောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါပဲ omni-channel စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ရလဒ်များကိုတိုးတက်စေရန်ဂရုတစိုက် orchestrated ခံရဖို့ရှိပါတယ်။
အကယ်၍ သင်သည်ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့် ၀ ယ်သူ၏ခရီးမတိုင်မီစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်လျှင်၊ သင်ကပွတ်တိုက်မှုကိုလျှော့ချပြီးပိုမိုထိရောက်စွာဝယ်ယူမှုသို့ပို့ဆောင်နိုင်သည်။ တကယ်တော့ Cisco မှသုတေသနပြုချက်အရကမ်းလှမ်းသောလက်လီရောင်းချသူများကဖော်ပြသည် အရာအားလုံး၏အင်တာနက် အတွေ့အကြုံများ အမြတ်တိုးတက်မှု ၁၅.၆ ရာခိုင်နှုန်းကိုဖမ်းယူနိုင်သည်.
ဂူးဂဲလ်သည်မိုဘိုင်းအသုံးပြုသူကိုအာရုံစိုက်နေစဉ်၊ ဝယ်ယူမှုမှ upsell သို့သက်တမ်းတိုးခြင်းသို့ ၀ ယ်သူခရီးစဉ်တိုင်းကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုသင်အသိအမှတ်ပြုရမည်။ အမှန်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချချိန်များဝယ်ယူရန်မောင်းနှင်နေသောအကြောင်းအရာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်ရန်လိုအပ်သည်။ လူများထည့်သွင်းပါ သင်ယူခြင်းစတိုင်များ နှင့် တစ် ဦး ဝယ်ယူလှုံ့ဆျောသောဒြပ်စင် ပြီးတော့စျေးကွက်သမားတွေကအကြောင်းအရာတွေကိုထုတ်လုပ်ဖို့ရုန်းကန်နေကြရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့စကားဝိုင်းများကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အကြောင်းအရာများကိုထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ Analytics သည်၎င်းကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုမပေးသောကြောင့်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေသူများကပိုမိုသိရှိလိုသည့်အကြောင်းအရာကိုရှာဖွေနေကြသည် သူတို့ရဲ့အကြောင်းအရာရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်တိုင်းတာရန်အဖြေများ.
Tags: ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုCiscoအကြောင်းအရာစျေးကွက်ဘာသာပြောင်းဖောက်သည်ခရီးငါဝယ်ချင်တယ်ငါလုပ်ချင်တယ်ငါသွားချင်တယ်ငါသိချင်တယ်micro- အချိန်လေးmicromomentsGoogle နဲ့စဉ်းစားပါ
(စာရင်းအင်းများနှင့်အတူ) B2B အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းအပေါ်သဘောထားပြောင်းလဲခြင်း